Free Google Adwords Keyword Planner Nhazi | Isiokwu Planner
clever ads Abanye na na Google
Free online mgbasa ozi ngwaọrụ
Mepụta Google Ads ozi Google gị n'otu ntabi anya.
Chọta isiokwu dị mma maka Google Ads gị.
Nyochaa ma bulie mkpọsa mgbasa ozi Google Ads
Mepụta ọkọlọtọ ads maka ngosipụta Display gị.
Mee ka Google Ads gị sụgharịrị na-akpaghị aka na asụsụ ọ bụla.
Integrations maka online mgbasa ozi
Usoro Google Ads
Tinye koodu mkpọsa anyị wee nweta akwụmụgwọ Google Ads
Njikọ Njikọ Microsoft Teams
Anata gị PPC ads arụmọrụ on Microsoft Teams .
Lelee, tulee ma melite ads ozi gị na ekwentị mkpanaaka gị.
Digital Mgbanwe Pack
Mepụta gị website site ọkọ na-amalite na-akpọsa maka free.
Anata gị PPC ads arụmọrụ on Slack .
Tinye-na Google Sheets
Weta data mgbasa ozi PPC gị na Google Sheets .
Anata gị PPC ads arụmọrụ na Google Chat.
The kwesịrị-nwere ngwá ọrụ maka mgbasa ozi ụlọ ọrụ.
Abanye na na Google
Tọn ndị mmadụ na-eme Google searches ugbu a
Nwere ike ha na-ahụ gị?
Chọta ezi Keywords
Malite dee ịchọta kacha mma Keywords. Chọpụta ọhụrụ na ọnọdụ:
Iyo gị pụta.
Chọpụta nke zuru okè ohere.
Anyị dị ike nzacha na atụmatụ ngwaọrụ-enye gị ohere mmuo na ngwa ngwa ịchọpụta isiokwu ohere ị na-n'ezie nwere mmasi. Na anyị nile na-na-otu isiokwu Planner ị ga-adịghị mkpa ọ bụla ọzọ na ngwá ọrụ na-arụ a zuru ezu isiokwu nnyocha.
Mepụta isiokwu anatara ma na-ikpeazụ dobe ha ike.
Zọpụta ma chịkọta isiokwu gị na ndepụta ka ị nwee ike ijikwa ha oge ọ bụla na Clever Ads Keyword Planner. You'll ga-enwe ike ịmepụta listi ọhụrụ site na ncha, melite, ma jikota ha ma ọ bụ bufee mkpụrụ okwu site na otu ndepụta gaa na nke ọzọ.
Chọọ maka nri Keywords maka azụmahịa gị
Discover puku ndị ọhụrụ Keywords ma na-ezi na-arụpụta site nzacha otú ị-elekwasị anya naanị na Keywords na n'ezie ịdọrọ mmasị gị. Ị na-na na na-achịkwa.
Mepụta ọhụrụ ndepụta ma ọ bụ mezue gị ẹdude ndepụta
Ozugbo ị họrọ gị Keywords, ị ga-enwe ike ike a ọhụrụ ndepụta ha ma ọ bụ na-agụnye ha na otu dị na otu. Jikwaa ha na na na na na ha dị ka ị chọrọ - ichefu banyere Excel.
Bulite isiokwu gị ozugbo na mgbasa Google Ads ozi Google Ads gị
Mfe bulite isiokwu site na listi gị gaa na mgbasa Google Ads ozi Google Ads gị n'otu pịa. Chọta isiokwu ndị ị na-efu na mkpọsa gị na nlele ma bulie arụmọrụ gị.
Chọpụta ọhụrụ Keywords n'ebe ọ bụla
Clever Ads isiokwu Planner na-iji napụta kacha ike na ngwaọrụ ọ bụla. Yabụ ị nwere ike iji ya n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Naa asọmpi na anyị Chrome Extension
Chọgharịa osompi saịtị na-achọpụta na nke Keywords na-enyere ha na-adọta okporo ụzọ.
Kasị mma anyị mma? Anyị ọrụ.
Na Clever Ads , ọ dịghị ihe dị anyị mkpa karịa ndị ọrụ na ndị ahịa anyị. Lee ihe ha na-ekwu:
“M karịsịa dị ka Chrome ndọtị ha mepụtara, otú a ka m nwere ike nyochaa yiri weebụsaịtị na-esi na echiche si Keywords ha na-eji. M na-enwe na m nwere ike ibudata niile ozi metụtara Keywords maka free otú ahụ ka m nwere ike ime ka mma na ndị ọzọ asian mkpebi.”.
“Keywords m nwetara site na Google Keyword Planner na-abụkarị ọnye na-adịghị akọwapụta ... ọ bụ ya mere m ji ahọrọ Clever Ads Keyword Research Tool. Ọ na-enye m nsonaazụ zuru ezu ka ha na-enweta data sitere n'ọtụtụ isi, yana achọghị m ịnweta Google Ads ma ọ bụ debanye aha ebe ọ bụla.”
“Ozugbo m gụnyere ụyọkọ isiokwu ọhụụ achọpụtara m site na Clever Ads keyword tool, enwere m ike ịba ụba na CTR nke Google Ads m. Ugbu a ka m na-agwa maka isiokwu ndị m na-ege ntị na-achọ n'ezie, akwụsịrị m imebi ego na-adọta okporo ụzọ dị ala.”
Tọn ndị mmadụ na-achọ gị ọrụ na ngwaahịa na Google. Ịkọwa ihe Keywords ha na-eji.
More banyere Clever Ads Keyword Planner FREE tool
Zute amamihe nile na-na-otu isiokwu research ngwá ọrụ maka marketers na-akpọsa ngwá ahịa. Ibe gị SEO atụmatụ now!
Ihe anyị na-enye
Atụmatụ na uru nke anyị Keyword Planner
Jiri ngwa ọrụ SEO a, ị ga-adọta ndị nwere mmasị n'ezie na azụmaahịa gị (ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ) site na ịkọwapụta mkpụrụokwu ziri ezi nke ndị ahịa gị nwere ike iji aka ha na-ede na nchọta ọchụchọ Google. Ezubere Onye Nzuzo Clever Ads Ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi iji mepụta asọmpi ahụ site na ịmịpụta mkpụrụ okwu ogologo ọdụ azụmahịa gị chọrọ maka Google Ads ozi Google ya ịga nke ọma. Usoro SEO dị mma dị mkpa maka saịtị gị iji rụọ ọrụ nke ọma, na SEO abụghị ihe ọ bụla na-enweghị ezigbo isiokwu nyocha. Ka anyị nyere gị aka!
Nweta ezi & utịp maka azụmahịa gị
Anyị isiokwu free ọgbọ ngwá ọrụ ga-egosi gị niile mkpa Keywords metụtara gị search na-ekwe ka ị ka iyo ha site isi Google mgbasa ozi metrics. Ị ga-enweta ezi na-arụpụta ezigbo mkpebi na-ahọrọ ndị kasị mma na-eme Keywords gị mkpọsa. Na-eme ka ahịa mkpebi na a azụmahịa na-enweghị ndidi ọma asian na-enwe nri pụta pụrụ iduga ogbenye arụmọrụ ma, mmọdo, ọ bụghị na-eru anyị ebumnobi ke chọrọ oge. Na isiokwu anatara nke anyị isiokwu planner ị ga-enweghị nsogbu a na ọ bụ kpam kpam free!
Echefu banyere Excel na mgbagwoju anya spre ads heets
Anyị maara na ijizi na nyochaa data na nnukwu akwụkwọ nwere ike ịhapụ gị ike gwụrụ na nkụda mmụọ, yana ịchọrọ oge na ego etinyegoro na ya, na-enye nsonaazụ adịghị mma. Amala jijiji, anyị bịara inyere gị aka! Oge ị ga - ebudata tọn nke isiokwu dị iche iche na Excel spre ads heet ma rụọ ọrụ na ya ruo ọtụtụ awa iji nyochaa ma hazie ha agafeela. Qualityme nnyocha isiokwu dị mma dị mfe ugbu a maka Clever Ads keyword planner tooler. Hazie ndepụta aha gị, jikọta ha, kewaa ha ma ọ bụ mezue ha ozugbo site na ngwa anyị. N'efu. Ọ dịghị obere ebipụta. Amala jijiji, anyị bịara inyere gị aka!
SEO na ahịa mma omume
Malitere na enyemaka ndị mmadụ chọta ị
Ebuli gị PPC (ụgwọ-kwa-click) mkpọsa na mbo mbuli gị ROI (Laghachi Of Investment) na ahịa site na ezubere iche na mkpa Keywords gị ahịa na-achọ elu na na ugbua na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na gị asọmpi. Ị gaghị agbaghara a otu ohere mgbe n'ịrụ gị isiokwu nnyocha.
Na Clever Ads anyị na-enye gị ozi a na-achọghị iche site na ịnweta isiokwu sitere n'ọtụtụ isi data, ọ bụghị naanị site na Google. A na-echekarị data nke Keyword Planner Google, anyị wee mepụta ngwa ọrụ mkpụrụ okwu anyị ka ị nwee ike ịme nyocha isiokwu ka mma ma mee mkpebi amamịghe maka usoro nnweta akwụ ụgwọ gị.
Malite mgbasa ozi ozugbo
Site na Clever Ads eji eme ihe na igwa ihe banyere igwa ihe igha edighi ighota ya na ebe ichoro na otutu ebe! I nwekwara ike bulite ha na Google Ads ozi Google gị na otu mgbasa ozi ozugbo na Clever Ads gị - otu ebe! Oge bụ ego na anyị chọrọ ka ịchekwaa ma site na iji ngwa ọgụ anyị.
Ga-eme isiokwu njikarịcha
Cheta na SEO kacha mma omume n'ọnụ bụ na i kwesịrị oge elele arụmọrụ nke gị Keywords imeghari ka ha evolushọn, stop Keywords na na-underperforming n'ihi na ha adịghị amasị azụmahịa gị, na-anwale ọhụrụ Keywords na ike dịkwuo arụmọrụ nke gị mkpọsa. Always na-anya na isiokwu na ọnọdụ! Isiokwu testing bụ isi na anyị ga-n'aka na-echetara gị imelite gị Keywords zere okodu ego isi na underperforming Keywords. Na anyị isiokwu planner ị ga na-atụ uche a ihe.
Gịnị na-eme anyị dị iche iche
Mmadụ Bịa na-eme n'ọdịnihu nke isiokwu nnyocha na SEO nkenke
Ahụmịhe anyị n'ịmepụta ma na-ebuli Google Ads maka ihe karịrị ụlọ ọrụ 150,000 na-enyere anyị aka ịmata ihe dị gị mkpa n'ezie mgbe ị na-ahọrọ mkpụrụokwu dị mkpa maka azụmahịa gị. Anyị maara ihe ị chọrọ! Iji Clever Ads Keyword Planner, isiokwu nyocha ga-adị ọsịsọ ma dịkwa mfe, ị nwere ike ịlaghachi mgbe niile iji melite ma jikwaa ndepụta isiokwu gị. Gị SEO ga-enwe mmelite, otu a ka ebumnuche azụmahịa gị ga-adị.
Ọzọkwa, anyị chọrọ ka ị mụta na usoro ahụ, yana Premier Google Partners, anyị nwetara azụ gị ma kwe gị nkwa na ị ga-enweta ọtụtụ ihe na ahụmịhe anyị. You gaghị achọta naanị isiokwu na SEO ngwa ọrụ, kama ọ bụ onye mmekọ na mpụ, onye ọ bụghị naanị inye gị isiokwu ndị ị na-achọ, kamakwa akụ na ozi ịchọrọ iji bụrụ Google Ads n'onwe gị. Azụmaahịa gị ga-achọpụta ihe dị iche!
All-na-otu isiokwu planner
Mee nyocha isiokwu gị site na mmalite ruo na njedebe na-ahapụghị Clever Ads ọ dị mfe dị ka nke ahụ! Site na ịbanye isiokwu ma ọ bụ URL (nyocha na isiokwu ndị na-asọmpi gị na-abụghị ịghọ aghụghọ ule! Ọ bụ ụzọ ọzọ!) Iji tinye aro isiokwu nke ị họọrọ na mkpọsa Google Ads Ha niile si n'otu ebe, na-enweghị ịgbanwe ngwaọrụ ma ọ bụ njikwa ogwe. Ma ọ bụ n'efu! I kpebie!
Ọnụ na anyị siri ike
Iji Clever Ads Keyword Generation Tool tinyere ngwa ọrụ anyị ndị ọzọ, nke ị nwere ike ịchọta na ibe anyị, ga-eme ka Google Ads gị kachasị elu ma bulie nraranye na mmefu ego gị. Ahịa gị na nsonaazụ gị ga-akawanye mma ... Gini mere ị ga - eji meziwanye mkpụrụ okwu gị mgbe ị nwekwara ike ịmegharị mkpọsa niile na Google Ads Audit na - akwụghị ụgwọ nke na - emepụta mgbasa ozi mara mma ma na - achọpụta ọhụụ ọhụụ Google Ads na ntanetị ole na ole? Google Ads gị niile site n'otu ebe wee bụrụ ihe a na-apụghị igbochi site na Clever Ads . N'etiti ngwaọrụ anyị ndị ọzọ, ị ga - achọta ọ bụghị naanị nyocha na onye na - eme atụmatụ isiokwu, kamakwa Onye Okike Mgbasa Ozi, Onye Ọkọlọtọ Banner maka mkpọsa ngosi gị, ngwa mkpanaaka ebe ị nwere ike ịlele ma nyochaa usoro metrik gị niile, yana njikọta dị iche iche na ngwaọrụ dịka Slack , Microsoft Teams ma obu Google Chat . Chọpụta ha niile ma mee ka mkpọsa mgbasa ozi Google gị ghara igbochi!
First ihe mbụ: anyị nwere gị azụ
Anyị ga-arịọ gị ka ị banye na akaụntụ Google Ads gị iji mepụta ndepụta aha gị, n'ụzọ a ị ga-abụ mgbe nile ịlaghachi ma jikwaa ndepụta ọchụchọ gị. Anyị na-eji data nzuzo akpọrọ ihe ma na-anakọta ihe anyị kwesịrị iji nye gị ahụmịhe kachasị mma.
Clever Ads eji teknụzụ dị ka kuki iji melite ahụmịhe gị, hazie ọdịnaya na mgbasa ozi, nye njirimara mgbasa ozi mmekọrịta, na nyochaa okporo ụzọ anyị. Pịa n'okpuru iji kwenye iji teknụzụ a na weebụsaịtị anyị - echegbula, anyị na-asọpụrụ nzuzo gị.
Clever Ads bụ mpako Premier Google
Mere na byhụnanya site Clever Ads - 2021